DataNumen: कुकी नीति
घर कुकी नीति
कुकी भनेको के हो?
कुकी पाठको सानो टुक्रा हो जुन वेबसाइटहरूले ब्राउजरमा पठाउँछन् र प्रयोगकर्ताको टर्मिनलमा भण्डार गरिन्छ, जुन व्यक्तिगत कम्प्युटर, मोबाइल फोन, ट्याब्लेट, इत्यादि हुन सक्छ। यी फाईलहरूले वेबसाइटलाई तपाईंको भ्रमणको बारेमा जानकारी सम्झन अनुमति दिन्छ, जस्तै भाषा र रुचाइएको विकल्पहरू, जसले तपाईंको अर्को भ्रमणलाई सजिलो बनाउन र साइटलाई तपाईंको लागि थप उपयोगी बनाउन सक्छ। कुकिजले वेबमा प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
कुकीहरू कसरी प्रयोग गरिन्छ?
यो वेबसाइट ब्राउज गरेर तपाईं स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ कि हामी तपाईंको मेसिनमा कुकिज स्थापना गर्न सक्दछौं र हामीलाई निम्न जानकारीहरू दिनुहोस्:
वेबको प्रयोगकर्ताको प्रयोगमा तथ्या information्क जानकारी।
मोबाइल उपकरणहरूबाट वेब पहुँचको मनपर्दो ढाँचा।
वेब सेवाहरू र डाटा अनुकूलन सेवाहरू माथि नयाँ खोजीहरू।
विज्ञापनको बारेमा जानकारी जुन प्रयोगकर्तालाई प्रदर्शित हुन्छ।
प्रयोगकर्ताहरूको लागि सामाजिक नेटवर्कमा डाटा जडान, तपाईंको फेसबुक वा ट्विटर पहुँच गर्दै।
कुकीहरूको प्रकारहरू प्रयोग गरियो
यस वेबसाइटले दुबै टेम्पो प्रयोग गर्दछrary सत्र कुकीहरू र लगातार कुकीहरू। सत्र कुकिजले सूचनाहरू मात्र भण्डारण गर्दछ जब प्रयोगकर्ताले वेबमा पहुँच गर्दछ र टर्मिनल डाटामा भण्डार गरिएको लगातार कुकीहरू पहुँच गरिन्छ र एक भन्दा बढी सत्रमा प्रयोग गरिन्छ।
प्राविधिक कुकीहरू: यसले प्रयोगकर्तालाई वेबसाइट वा अनुप्रयोग मार्फत नेभिगेट गर्न र बिभिन्न विकल्पहरू वा सेवाहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरण को लागी, यातायात नियन्त्रण र डाटा संचारको साथ, सत्र पहिचान गर्न, पहुँच प्रतिबन्धित वेब पार्ट्स, आदि।
कुकिज अनुकूलन: यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाईंको टर्मिनल, वा प्रयोगकर्ता परिभाषित सेटिंग्समा केहि पूर्वनिर्धारित सामान्य सुविधाहरूको साथ सेवा पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरण को लागी, भाषा, ब्राउजर को प्रकार को माध्यम बाट तपाई सेवा पहुँच गर्नुहुन्छ, चयनित सामग्री को डिजाइन।
सांख्यिकीय विश्लेषण कुकीहरू: यसले वेबसाइटहरूमा प्रयोगकर्ता व्यवहारको अनुगमन र विश्लेषणलाई अनुमति दिन्छ। त्यस्ता कुकीहरू मार्फत जम्मा गरिएको जानकारीलाई वेब, अनुप्रयोग वा प्लेटफर्म साइटहरूको गतिविधि मापन गर्न र प्रयोगकर्ताहरूका लागि सेवा र कार्यक्षमतामा सुधार गर्नका लागि यी साइटहरूको प्रयोगकर्ता नेभिगेशनको प्रोफाइलि। मा प्रयोग गर्दछ।
तेस्रो पार्टी कुकीहरू: केहि वेब पृष्ठहरूमा तपाइँ तेस्रो-पार्टी कुकिज स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँलाई प्रदान गरिएका सेवाहरू प्रबन्धन र सुधार गर्न अनुमति दिँदछ। उदाहरण को लागी, गुगल विश्लेषक को सांख्यिकीय सेवाहरु।
कुकीहरू बन्द गर्दै
तपाइँ तपाइँको ब्राउजरमा सेटिंग सक्रिय गरी कुकीहरू रोक्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँ सबै वा केहि कुकीजको सेटिंग इन्कार गर्न अनुमति दिँदछ। जहाँसम्म, यदि तपाइँ तपाइँको ब्राउजर सेटिंग्स को उपयोग सबै कुकीहरु (आवश्यक कुकीज सहित) लाई ब्लक गर्न को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँ सबै वा हाम्रो साइट वा तपाइँले भ्रमण गर्ने कुनै अन्य वेबसाइटहरूको अंशहरू पहुँच गर्न सक्षम नहुन सक्नुहुन्छ।
आवश्यक कुकीहरू बाहेक, सबै कुकीज समय अवधि पछि समाप्त हुन्छन्।